Mmadụ itoolu nwụrụ n’ihe mberede ụgbọelu Russia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nchedo njem na Mberede » Mmadụ itoolu nwụrụ n’ihe mberede ụgbọelu Russia
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Mmadụ itoolu nwụrụ, ọtụtụ merụrụ ahụ n'ihe mberede ụgbọelu Russia
Injin injin na-ebute ihe mberede ụgbọelu na-egbu egbu na Siberia Russia.
Gbọ elu ahụ bụ nke otu mpaghara mpaghara nke otu egwuregwu egwuregwu DOSAAF.
Aircraftgbọ elu ahụ jiri nku ya daa n’ala wee tụgharịa.
Egburu ndị ọrụ abụọ na ndị omekome asaa, mmadụ itoolu na mkpokọta.
Egburu mmadụ itoolu ma merụọ ọtụtụ ahụ mgbe ụgbọelu ejima Let-L410 dara n'ụgbọelu dara na Kemerovo Region na ndịda ọdịda anyanwụ Russia nke Siberia. Mmadụ iri na itoolu nọ n’ụgbọelu - ndị ọkwọ ụgbọelu abụọ na mmadụ iri na asaa na-efegharị efegharị.
Gbọ elu ahụ bụ nke otu mpaghara mpaghara DOSAAF Otu egwuregwu na-arụ ọrụ nke ọma ma na-agba ụgbọ elu nke anọ nke ụbọchị ahụ mgbe nhụjuanya injin rutere ya obere oge ka ọ gbasịrị ya.
Ndị ọkwọ ụgbọ elu nwara ịwe ụgbọelu ahụ, mana ụgbọ elu ahụ jiri nku ya daa n'ala wee kwatuo ya, onye isi Kemerovo DOSAAF kwuru.
Onye ọrụ ahụ kwuru, sị, "Dị ka ozi m si kwuo, ndị ọrụ ụgbọ mmiri abụọ na ndị ọrụ mgbasa ozi asaa nwụrụ, mmadụ itoolu na ngụkọta."
O dochaghị anya ihe kpatara injin engine ahụ na-egbu egbu dịka ụgbọelu ahụ nọ n'ọnọdụ dị mma nke ọma ma rụọ ụgbọ elu atọ n'ụbọchị ahụ.